Jesse Williams kudanana nemitambo yemitambo Taylor Rooks - Nhau
'Grey's Anatomy' nyeredzi Jesse Williams ari kufambidzana nemutambi wenhabvu Taylor Rooks
Jesse Williams ane mukadzi mutsva muhupenyu hwake.
Mwedzi mina mushure memusoro wenyaya wakaratidza kuti achazopatsanuka kubva kuna Minka Kelly, mutambi we 'Grey's Anatomy' - ari pakati pekukakavara kwekuchengeta mwana mushure mekuparadzaniswa kwa2017 nemukadzi Aryn Drake-Lee - aenderera mberi neSportsNet New York anchor Taylor Rooks , Peji Rechitanhatu inoshuma.
'Ivo vane shungu dzekuti vachengetedze kudanana kwavo pasi pekuputirwa. Akagara achirambana nemurume, asi akawana nyaradzo naTaylor, 'akadaro mumwe wevanopinda mukati Peji Yechitanhatu.
Musi waMay 26, Jesse naTaylor 'vakatsvedza kupinda muAtlantic City kwemaawa makumi maviri nemana,' insider akaudza makuhwa kuNew York Post makuhwa, ayo anoenderera mberi achitaura kuti Jesse, 36, naTaylor, 26, vakaonekwa pazuva reChirangaridzo pavhiki reKevin. Hart's comedy show paBhodiwalk Hall muAtlantic City, New Jersey.
Glam yechiratidziro manheru ano! Mvere by @ dottie.shannon - makeup by @ venusgoddessangelfairy444
Chinyorwa chakagovaniswa na Taylor Rooks (@taylorrooks) musi waMay 25, 2018 na4: 19 pm PDT
Pamberi paTaylor - uyo akavandudza hushamwari pasocial media uye mukurumbira wekuwana mazita makuru kuvhura pane yake 'Timeout NaTaylor Rooks' podcast - akatamira kuSportsNet New York, aive kuBig Ten Network. Iye akashandawo kune CBS Sports Network uye sebhora uye basketball kuunganidza mutori wenhau weScout.com.
Anouya achibva kumhuri yevatambi vanosanganisira baba vake, aimbove nyeredzi yenhabvu yekoreji paUniversity yeIllinois kuUrbana-Champaign (inovawo Taylor's alma mater), nasekuru vakambotambira maSt. Louis Cardinals uye nePittsburgh Steelers New Orleans Vasande.
Taylor ndiye mukadzi wekutanga uyo Jesse anga achidanana naye kubvira Minka, 37.
Rini Jesse nemukadzi Aryn vakapatsanurwa gore rapfuura , vamwe vateveri vakapomera mutambi uyu zvekumusiya kuna Minka, waakange achishanda naye mumutambo wevhidhiyo nguva pfupi isati yatanga kurambana. Muna Chikunguru 2017, Jesse akapomera vatsoropodzi vake muvhidhiyo yaJAY-Z 'Mashoko Omuzasi kubva pa4: 44.'
'Ndakanga ndiri muhukama makore gumi nematatu, makore gumi nematatu chaiwo, kwete makore mashanu, kwete makore manomwe, makore gumi nematatu uye kamwe kamwe amai mai f-- - vari kunyora kufunga zvidimbu zvekuti neimwe nzira ndakakanda hukama hwemakore gumi nematatu,' akadaro Jesse, 'sechiitiko chinorwadza kupfuura zvese chandakave nacho muhupenyu hwangu semunhu wandaida nemoyo wangu wese - kuti ndakakanda munhu nemhuri yangu mumarara nekuti musikana wandinoshanda naye akanaka.'
Akabuda pachena naMinka zhizha rapfuura uye muna Gumiguru, akaramba kuti akaita chero chikamu mukuparara kwemuchato wake.
Mushure memushandisi we Instagram akataura, 'Ndinovimba makuhwa ekunyepera haasi echokwadi. Zvingaodza moyo, 'Minka akadzinga,' Havasi ivo. Ruvengo kuti iwe unyadziswe. Ndakafara kuti ndaigona kukujekesera izvozvo. Zvino f— ibva. '
Reese Witherspoon achipa madhirezi emahara kuvadzidzisi
Jennifer Lopez naAlex Rodriguez vachasunga pfumo kuYankee Stadium?
stacey dash akaroora here
vari ben affleck naJennifer garner kudzokerana